EXT4 uye Btrfs zvichave nezvitsva zvitsva muLinux 5.1 | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Kernel, Noticias
Linux 5.0 yakatoburitswa, ndiyo yekutanga iyi nhamba nyowani kubvira 4.x yakadonhedzwa mu2019 uye isu tatova neLinux 5.0.1 ine inogadziridzwa pa kernel.org kare. Asi ingori imwe nhanho imwe mukusimudzira kernel, uye hustle yekuvandudza iyo yakavhurika-sosi purojekiti inoenderera pamwe nebasa pane inotevera Regedza maCadidates e Linux 5.1 izvozvo zvinokurumidza kuuya. Muchokwadi, isu tatoziva zvimwe zvekuvandudza izvo zvichabatanidzwa mune iyo nyowani kernel.
Pakati pavo tichava neshanduko dzakakosha mune izvo zvinongedzera kumafaira masystem kana FS sezvaari EXT4 uye zvakare for btrfs, maviri eFS anonyanya kushandiswa muLinux nyika, sezvaunoziva. Kunyanya pachave nezvakabatiswa kugadzirisa zvimwe zvinhu zveaya masisitimu mune yemberi kernel. Ivo havasi kuzopa shanduko hombe maererano nezvimiro, asi ivo vanovimbisa kugadzirisa iyo iripo system uye zvakare kugadzirisa mamwe mabugs uye nekuita mamwe optimizations.
Chinhu chega chitsva cheEXT4 muLinux 5.1 chichava hunhu / sys / fs / ext4 / [disk] / journal_task kufumura iyo systemystem jenareta system, iyo ingave yakanaka kune vanogadzira uye manejimendi vanouya nemamwe mikana yekuifambisa kuenda kuboka kana kutsvaga zvinangwa. Isu takadzidza kuti nekuda kwaTed Ts'o, uyo akazvisimbisa, uye kune rimwe divi, mugadziri Dave Sterba anga achitarisira Btrfs.
Nezve iyi imwe FS tinoziva kuti kuchave nekumwe shanduko kwaari, kusanganisira iyo mukana wekugadzirisa kumanikidza kweZstd. Icho chingave chakakura uye chinoshamisa chimiro kune vashandisi vekupedzisira. Kunze kweizvozvo, mamwe mabugs akawanikwa anokanganisa kumwe kuwedzera, kumwe kufoira uye zvimwe zvikanganiso zvidiki izvo zvino zvave kutambura kana isu tine tsanga dzazvino uye iyi faira system mune yedu yatinoda kugovera ichatorwawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » EXT4 uye Btrfs zvichave nezvitsva zvitsva muLinux 5.1
maviri eiyo anonyanya kushandiswa FS muLinux nyika, sezvaunoziva ... aya mafaera masisitimu ane mvere kwazvo !!! :)
Firefox Tumira: yemahara yakavharidzirwa faira yekugovana sevhisi